Xildhibaannada ku raagay BFS oo loolan adag wajahaya | KEYDMEDIA ONLINE
MUQDISHO, Soomaaliya - Dhallinyaro aad u badan ayaa markaan doonaya iney kaalin mug leh ka qaataan doorashooyinka baarlamaanka ee dhowaan dalka ka qabsoomi doona.
Boqolaal dhallinyaro ah oo wax soo baratay ayaa markaan wada olole ay ku doonayaan iney galaan tartamada loogu jiro helista kuraasta BFS.
Dhallinyaradan qaarkood oo la hadlay Keydmedia online, waxay sheegeen in uu dhammaaday waqtigii odayada ay kuraasta kusii fadhin lahaayeen sanado kale, markaanna ay doonayaan iney tijaabiyaan doorkooda.
Xildhibaannada qaar ee BFS weli ku jira ayaa beesha ay matalaan waxay kuraastaasi ugu fadhiyeen in ka badan 15 sano, waana midda soo dedejisay in dhallinyaradu baraarugto, lana soo baxaan damaca kuraastan.
Sababaha xildhibaannada usii joogi jireen kuraastaasi ayaa ahayd Labo arrin oo kaliya:
1- In lacago badan ay siiyaan waxgaradkii wax soo xuli jiray iyo sidoo kale ergada doorashada.
2- In aysan jirin cid kale oo beesha ah oo kursiga damac uu ka geli jiray.
Hadaba dhallinyaradan ayaa qaarkood dalka dibaddiisa ka yimid, halka kuwa qaarna ay gudaha dalka wax ku barteen.
Hammiga dhallinyaradan ayaa haddii uu rumoobo waxaa suurtagal in marxaladda dalka uu ku jiro wax badan iska bedalo.
Inkastoo ay macquul tahay in xildhibaannada ku raagay kuraasta beelahooda ay xeelado kale la yimadaan, ayaa hadana waxaa macquul ah in dhallinyarado qudhoodu ay keensadaan fekrado ay hamigooda ku rumeyn karaan.
Shacabka Soomaliyeed ayaa badi aaminsan in dalka uu ka degi la yahay Odoyaal iyo siyaasiyiin muddo xukunka soo hayey, islamarkaana aana eegin mustaqbalka ciyaalka, ee fiirsada danahooda dhaqaale.
0 Comments Topics: farmaajo gollaha shacabka mursal rooble